Boqolaal Shirkado Nederland ah ayaa si sharci daro ah shaqaalaha ugu tijaabiya daroogada • Dawooyinka Inc.eu
Boqolaal shirkadood oo Nederland ah ayaa shaqaalaha u tijaabiya isticmaalka daroogada waxayna ku xadgudbaan qawaaniinta u gaarka ah. Tani waxay caddayn u tahay cilmi baaris ay sameysay barmaamijka saxaafadda ee Investico, kaas oo gacansaar la leh Trouw, De Groene Amsterdammer iyo De Stentor.
Sharciga asturnaanta Nederland wuxuu kaliya qeexayaa wadayaasha, kaftanka, wadayaasha iyo duuliyeyaasha daroogada waa la tijaabin karaa. Tani waa inuu sameeyaa dhakhtar shirkadeed natiijadana waxaa daboolaya sirta caafimaadka. Investico waxay ogaatay in shirkado badan ay sidoo kale tijaabiyeen shaqaale kale. Tijaabooyinkan daroogada waxaa sameeyay ilaalada guriga dhexdiisa ama shirkadaha baaritaanka dibadda. Sida laga soo xigtay cilmi-baarayaasha, tani waxay ku saabsan tahay tobanaan kun oo qof.
Tijaabada daroogada ee shaqaalaha dhexdeeda
Shaqaalaha amniga iyo shirkadaha imtixaanka qaaska ah ee la kireysto waxay candhuuf ka qaadaan shaqaalaha 'albaabka' si ay u ogaadaan haddii ay ku jiraan haraaga qamriga, daroogada culus, marijuana ama (meth) amphetamine. Tijaabooyinka noocan oo kale ah waxay mararka qaarkood tijaabiyaan mid ka mid ah toddobadii shaqaaleba. Isticmaalka maandooriyaha waa mushkilad dhab ah, gaar ahaan qeybaha ay ka socdaan shaqooyinka culus iyo kuwa culus, ayuu yiri milkiilaha Stephan Roelofs oo ka tirsan shirkadda ka hortagga daroogada iyo hay'adda baaritaanka ee ArboFit. Waxaan gacmaha ka wasakheynaa. Aniga oo ku hadlayna magaca macaamilka, waxaan u oggolaanay caafimaadka iyo nabadgelyada inay ka sarreeyaan xeerarka u gaarka ah.
Akhri wax dheeraad ah madal-investico.nl (Xigasho, NL)
Cunto kariye Talyaani ah ayaa loo xiray xashiishadda 'tijaabinta dhadhanka cusub'
Cunto kariye TV Sicilian ah ayaa loo xiray tuhun la xiriira ka ganacsiga daroogada ka dib markii booliska ay xashiishad ka heleen guriga ...
Xiddigaha ayaa ku soo kordha warshadaha xashiishka canbaaraynta
Dadka caanka ah ayaa si guud ugu soo galaya suuqa xashiishadda sharciga ah. Waxay adeegsadaan dhammaan dhinacyada warshadaha: ...
Nederland si sharci ah ayey u diyaarineysaa tijaabinta beerista cannabis ee madadaalada
Nederland waxay aasaas u tahay inay noqoto waddankii ugu horreeyay Yurub ee soo saara wax soo saar ganacsi ...